Ukupheka kweMidori - Cocktail Iindlela Zokupheka
I-Midori cocktails zimnandi nge-melon flavour okanye isandi. UMidori Liqueur eqaqambileyo, eqaqambileyo eluhlaza, ene-muskmelon-flavored efumana igama layo kwigama laseJapan eliluhlaza. Njengotywala obumnandi, uMidori uhlala e-foil ukuba amuncu kwiziselo ezahlukeneyo. UMidori uyathandeka ngeendlela ezahlukeneyo zejusi ezinje ngelamuni, ikalika, iorenji, kunye neinanapple kwaye uyathandwa ngabantu abathanda i-cocktail ngamazinyo amnandi.
1. Ibhola leMidori Melon
Le cocktail yokuhlaziya iyimfuneko yexesha levatala; Iibhola zeevatala ezintsha zenzela ulonwabo kunye nencasa. Ungasebenzisa i-honeydew, i-watermelon, i-cantaloupe, okanye nayiphi na into oyithandayo. Ikhonza inye.
I-Hulk engummangaliso Sela iiresiphi
12 Luscious (kodwa kulula) UFrangelico Sela iiresiphi
Ii-ounces ezi-2 Midori
Ii-ounces ezi-3 zejusi yeorenji
Iibhola zemonon, zisandula ukukhutshwa
KwiI-cocktail shaker, Hlanganisa iMidori, ivodka, kunye nejusi yeorenji.
Thela ngaphezulu komkhenkce kwiglasi yebhola ephezulu.
Gcoba ngeebhola zebhola.
2. Isiliphu saseJapan
Le cocktail yaseMidori yazalwa kwii-80s kwaye ilungile, isezantsi ekunokukhethwa kuyo ngotywala kuye nabani na okhangela into emnandi kwaye engathandekiyo. Ikhonza inye.
1 enye iMidori
1 ounce sec sec okanye enyei-orenji enencasa yeorenji
I-ounce ijusi yelamuni
Isilayi sehoneydew melon okanye ivili lemon lokuhombisa
Phola iglasi ye-cocktail.
Kwi-cocktail shaker, hlanganisa iMidori, isekhondi kathathu, kunye nejusi yelamuni.
Yongeza umkhenkce ushukume.
Gxininisa izithako kwiglasi ye-cocktail.
Gcoba iglasi ngesilayi sehoneydew okanye ivili lemon.
3. IBlue Bahamas
Ukulangazelela impepho yetropiki kunye nesanti phakathi kweenzwane zakho? YonwabelaIBlue Bahamasi-cocktail, umxube omibalabala kunye nencasa yeMidori, curaçao eluhlaza okwesibhakabhaka, i-gin, i-sec kathathu, i-rum, ivodka kunye ne-tequila.
4. UMidori Sour
Eyona ndawo ithandwa kakhulu kwaye iyaziwa ngokugqibeleleyo njenge-Midori cocktail, omuncu, ulinganisa ubumnandi bukaMidori ngokugqibeleleyo. Ikhonza inye.
I-ounce ijusi yekalika
Ii-ounces ze-2 ze-Sprite okanye enye ilamula-lime soda
I-Maraschino cherries okanye isilayidi seorenji sokuhombisa
Kwi-cocktail shaker, hlanganisa iMidori kunye nejusi yelisi.
Ukunyathela kwiglasi yecolins ezaliswe ngumkhenkce. Yongeza i-lime lime soda kwaye ugxobhoze.
Gcoba nge cherries okanye isilayidi seorenji.
5. UMidori Splice
Ukuba ukwimo yento ethile yetropiki, zama iMidori Splice. Uyakukhutshwa kwangoko uye kwiparadesi yesiqithi. Yenza isiselo esinye.
1 ukantiMalibu rum
Iijusi ezi-3 zepayina
Iinanapple wedge kunye necherry
Yongeza iMidori, iRum, kunye nejinanapple juice kwi-cocktail shaker.
Ukungena kwiglasi yeCollins ezaliswe ngumkhenkce.
Cola ngobunono ukhilimu wekhokhonathi njengokuhombisa nge-chinanapple wedge kunye ne-cherry ngaphezulu.
6. UMidori Illusion
Isiselo esimnandi sikaMidori sinokuhanjiswa okanye njengebhulorho. Yenza i-cocktail enye.
Ounce nganye umzuzwana
I-juice ijusi yepayinapile
Ounce yencindi yelamuni
Isilayi sepineapple kunye neMaraschino cherries, ukuhombisa ngokuzithandela
Kwi-cocktail shaker, hlanganisa iMidori, ivodka, isekhondi kathathu, ijusi yeinanapple, kunye nejusi yelamuni.
Ukunyamezela kwiglasi yeCollins ezaliswe ngumkhenkce otyumkileyo.
Gcoba iinanapple kunye neetsheri.
7. IHoneydew Martini
I-Honeydew Martini ilungile kuye nakubani na othanda ukujija iziqhamo eMartini. Kulula ukwenza i-cocktail efuna izithako ezimbalwa kwaye inexabiso elifanelekileyo lobumnandi. Ikwangumgqatswa ogqibeleleyo wokuziqhelanisa nezinto ozithandayo kunye nencasa emveni kwesidlo sangokuhlwa.
8. Atomic Inja Shooter
Ukudubula okuluhlaza okucacileyo kumnandi kwaye kumnandi, kwaye kuyehla kuhle ngokugudileyo.
Mal ounce Malibu rum
Rum ounce irum emnyama
Thela zonke izithako kwiglasi yokudubula.
9. I-Melon Mojito
I-Melon kunye ne-mint yindibaniselwano emnandi, kwaye olu luhlaza lumnandiUMojitoiyahlaziya kwaye imnandi.
Amagqabi e-10 eminti
Ounce ukhupha ijusi entsha yelime
1 ounceumgubo omhlophe
2 iklabhu yesoda yeklabhu
Kwi-cocktail shaker, gxobhoza amaqabunga eminti kunye neMidori. Yongeza ijusi yelam, i-rum kunye neqhwa.
Shake ukuze ubande.
Ukungena kwiglasi yamatye ezaliswe ngumkhenkce. Gcoba ngamaqabunga amancinci.
Yongeza iklabhu yesoda. Khuthaza.
10. UMidori Daiquiri
KwiMidori daiquiri, beka endaweni eswiti (isiraphu elula) kunye noMidori nge-twist enomdla kwi-original.
Ounce ukhupha incindi yekalika esandula ukufakwa
¾ kanye Midori
1 ounces iirum ezimhlophe
Kwi-cocktail shaker, hlanganisa ijusi ye-lime, iMidori kunye ne-rum emhlophe.
Ukungena kwiglasi ye-cocktail ebandayo.
11. UMidori Ginger Gin Fizz
I-fizz sisiseko esimnandi esine-fizzy element eyongeziweyo. Le fizz idibanisa i-aromatics ye-gin, ubumnandi be-melon, kunye ne-spiciness ye-ginger-ale yokwenza i-cocktail enomdla ngokwenene.
Ii-ounces eziyi-1ILondon eyomileyo gin
Ii-ounces ezi-3 ze-ginger ale
I-orange peel yokuhlobisa
Kwi-cocktail shaker, hlanganisa i-gin, ijusi ye-lime kunye neMidori.
Ukunyathela kwiglasi yecolins ezaliswe ngumkhenkce. Yongeza i-ginger ale kwaye ugxobhoze.
Gcoba nge-peel orange
12. IPearl Harbour Cocktail
Ijusi ye-orenji, ivodka, kunye neMidori zidityaniswa kwisiselo esimnandi nesilula esixubeneyo esibizwa ngokuba yiIpearl Harbour cocktail.
13. I-Melon Margarita
I-margarita yenye iresiphi emuncu yakudala enamacandelo alinganayo amnandi, amuncu, kwaye omelele (umoya). Le isebenzisa iMidori njengeyona nto intle.
Iipunipoli ezi-2 zetyuwa
1 ikalika enqamlezileyo
1 ounces i-tequila emhlophe
Beka ityuwa erhabaxa kwisitya esinzulu. Qalisa i-lime wedge ejikeleze umda ongaphandle weglasi kwaye uyiqengqe kwityuwa ukuya kungqameko.
Kwi-cocktail shaker, hlanganisa ijusi yelisi, iMidori, i-tequila kunye neqhwa.
Ukungena kwiglasi yecocktail elungisiweyo.
14. Jolly Rancher Martini
Ukuba ubuthandile iilekese zikaJolly Rancher njengomntwana, amathuba okuba uyayithanda inguqulelo yabantu abadala- theI-Melon Jolly Rancher Martini.
Ukucinga ukuba uza kudibanisa ntoni noMidori? Laba baxube banamaqabunga ahamba kakuhle kunye ne-melon ye-melon ukunambitheka kunye nephunga, ngoko ke yindawo efanelekileyo yokuqala yokudala i-Midori cocktails yakho.
Ilamuni yekalika yesoda
Ijusi yeziqhamo zeediliya
UMidori Wenza Ubomi Bumnandi
Ngenxa yobumnandi bayo, iMidori isetyenziswe kakuhle njengenxalenye yecocktail kunokuba ikonwabele ngqo. Isiqhamo sawo senza ukuba ihlobo ligqibelele, njengomxube wokudibanisa uluhlaza kwii-cocktails zikaSt. Iindlela zokupheka ezininzi zeMidori zisezantsi etywaleni, oko kuthetha ukuba okoko usela ngokuthembekileyo, unokukwazi ukungena kwi-cocktail eyongezelelweyo ekupheleni kobusuku.
Ufeng Shui Kulekhaya Mens Historical Clothing Ubucwebe Begolide Iishiti Zebhedi Cheerleading Gear
uzothini xa usasaza uthuthu
Isebenza njani slim ebomini
Zingaphi iikhabhohbhini ezinayo iwayini
zeziphi izinja eziluma kakhulu
uyifumana njani idilesi yasimahla
indlela yokwenza uloliwe wephepha
iposi ivule ikrisimesi evulekileyo 2019